विचार / विश्लेषण मोदीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक गर Friday, 26 Aug, 2016 5:20 PM
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट बिशेष दूत उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई ७ रेसकोर्स रोडमा भदौ ४ मा बुझाएको लिखित पत्र यतिबेला विवादमा छ । एमालेले पार्टी स्थायी समितिको बैठकपछि उक्त पत्र सार्बजनिक गर्न माग गर्यो भने भदौ ९ मा बसेको (माओवादी केन्द्र)को सरकार संचालन सहयोग समितिको बैठकमा पत्रबारे दाहालसँग स्पष्टिकरण माग भयो । यसको अगुवाई गरे नेता देब गुरुङले ।
भारतसँग स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्रको व्यवहार गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई आश्चर्यजनक रुपमा हटाई दक्षिणको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गोप्य रुपमा बुझाएको उक्त पत्र सन् २००२ मा तत्कालीन माओवादीले पठाएकै पत्रको दोश्रो संस्करण हो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘टाइम्स अफ इण्डिया’ लाई प्राथमिकतामा राखी अन्तवार्ता दिएका दाहालको अन्तरवार्ताको मुख्य सार थियो–‘पहिले गल्ती गरँे, भारतीय चाहना पूरा गर्न सकिनँ । अव अनुभवी भएको छु, त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन । एकपटकलाई अवसर पाउँ ।’ अर्थात् अव भारतीय योजना कार्यान्वयन गर्नेछु र भारतीय सरकारले नचाहेका कुनै पनि काम अघि बढाउने छैन भन्ने प्रतिवद्धता । ठिक यस्तै प्रतिवद्धता दाहालले युद्धकालमै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग गरेका थिए– खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ मार्फत । यसको खुलासा बिवादास्पद प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ भन्ने पुस्तक मार्फत तीन वर्ष अघि गरिसकेकै हुन् ।
सन् २००२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई माओवादीले पठाएको पत्र एसडी मुनीले ११ वर्षपछि पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गरे । अहिले दाहालले मोदीलाई लेखेको पत्र त्यसैको दोस्रो संस्करण हो । युद्धकालमा गरेको उक्त प्रतिवद्धता आफ्ना बिश्वासपात्र मार्फतै सार्वजनिक भएपछि दाहालले खण्डन त गर्न सकेनन्, तर व्यवहारमा राष्ट्रवादी देखिने प्रयास भने गरे । प्रधानसेनापति प्रकरणमा सत्ताच्युत भएपछि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने कोसिस गरे । तर, त्यो पाखण्डमात्र रहेको तुरुन्तै सार्वजनिक भयो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतीय विदेश सचिव वा त्यही तहका अधिकारीसँग परामर्श गर्न चाहेको तर राजदूत राकेस सूदले उक्त सन्देशलाई लैनचौरको ‘डस्टविन’ मा थन्क्याएको आक्रोसपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दाहाल स्वयंले दिए ।
समकालीन राजनीति र कुटनीतिमा सबैभन्दा अस्थिर र अपत्यारिलो छवि बनाएका दाहालले मोदीलाई पठाएको पत्रमा संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक बिषय नभएको दाबी गरेका छन् । परराष्ट्र सचिवले ड्राफ्ट गरेको कुटनीतिक पत्रमात्र भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुबिधा दिंदै कुटनीतिक पत्राचारमात्र गरिएको ठान्ने हो भने उक्त पत्र किन सार्बजनिक नगरेको हो ? आम नेपाली नागरिकलाई यो जान्ने अधिकार छ । सार्बभौम देशका कार्यकारी प्रमुखले आफ्ना समकक्षीलाई लेखेको पत्रमा के छ ? यो कुनै गोप्य राख्नुपर्ने पत्र हुनै सक्दैन । सामान्य अवस्थामा यस्तो पत्राचार आवश्यक छैन । फेरि विशेष दुतका रुपमा भारत पठाउनुको अर्थ नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य छैन भन्ने लाग्छ । यस्तो अवस्थामा तिनै दूतले बुझाएको पत्र कुटनीतिक पत्राचारमात्र भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो प्रधानमन्त्री दाहालले प्रष्ट पार्नुपर्छ । कुटनीतिक शिष्टाचार स्वरुप लेखिएको पत्र हो भने सार्बजनिक गर्न प्रधानमन्त्री डराउनु पर्ने छैन । अन्यथा, नेपालको सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रताबिरुद्धका कुनैपनि क्रियाकलाप स्विकार्य हुंदैनन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक बिषय नभएको भने पनि श्रोतहरुले भारतीय चासोबिरुद्ध नजाने लिखित प्रतिबद्धतासहितको पत्र बुझाइएको दाबी गरेका छन् । अर्थात एसडी मुनीले खुलासा गरेकै जस्तो दोश्रो पत्र । होइन भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल उक्त पत्र सक्कलै सार्बजनिक गर्नुपर्छ ।
गोवामा दाहालको ब्यवहारले नेपालको राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि धक्का सम्पादकीय : संविधान संसोधनबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: सार्बभौम हैसियत कायम राख राजनीति